–	လီဗာပူးလျနညျးပွ ယာဂနျ ကလော့ပျရဲ့ အကွိုကျဆုံးကစားသမားဖွဈတဲ့ နောကျခံလူ ဗာဂြီးလျ ဗနျဒိုကျကို ဒဏျရာရရှိနပေမေယျ့လညျး မူလစီစဉျထားတဲ့အတိုငျး စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ လုပျဆောငျနခေဲ့ပွီး အသငျးဘကျက စတငျကမျးလှမျးမှုတှေ ပွုလုပျနပွေီလို့သိရ။
–	ဂြိုယယျလျ မာတဈပျရဲ့ နောကျဆုံးရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာကတော့ သူ့ရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုအတှကျ လီဗာပူးလျတို့အနနေဲ့ စိတျခထြားလို့ မရဘူးလို့ ပွသလိုကျတာလညျးဖွဈပွီး ဇနျနဝါရီမှာ မာမာခြာခြာနဲ့ အသငျ့သုံးလို့ရမယျ့ နောကျခံလူတဈဦး မချေါခဲ့ရငျ စိတျပကျြစရာ ရာသီဖွဈမယျလို့ ခနျ့မှနျးနကွေ။
–	လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျနဲ့ နညျးပွဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဂရယေမျ ဆူးနကျဈက စပါးဈအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဆှနျဟောငျမငျဟာ မိမိတို့ရဲ့ အသငျးမှာဆိုရငျ ပှဲထှကျလူစာရငျးထဲ ဝငျနိုငျမယျ့သူမြိုး မဟုတျဘူးလို့ ပှဲကွိုကျတိုကျခိုကျသှားခဲ့။
–	အာဆငျနယျနဲ့ ပွငျသဈကစားသမားဟောငျး သီယာရီ အှနျနရီက လီဗာပူးလျနညျးပွဟောငျး ဂရြယျ အူလီယေးဟာ နညျးပွတဈဦးထကျ အမြားကွီးပိုတဲ့ အရာရာမှာ လမျးညှနျပဲ့ကိုငျပေးသူတဈဦးဖွဈတယျလို့ ဆိုခဲ့ပွီး သူနဲ့ ပွငျသဈ ယူ-၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ အသငျးတှမှော ဆုံစညျးခဲ့တဲ့ အမှတျတရတှအေကွောငျး တမျးတပွောကွားသှားခဲ့။
–	လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ အနျးဖီးလျမှာ ရငျဆိုငျမယျ့ စပါးဈအသငျးရဲ့ ပှဲထှကျလူစာရငျးမှာ ဝါရငျ့ကစားသမား ဂါရကျဘေးလျကို အသုံးပွုလာဖှယျရှိပွီး နညျးပွ မျောရငျညိုအနနေဲ့ ဒဏျရာတှကွေောငျ့ အားနညျးနတေဲ့ ယာဂနျ ကလော့ပျရဲ့ အတှအေ့ကွုံနုနယျတဲ့ ခံစဈပိုငျးကို ဖိအားပေးဖှယျရှိနေ။
–	ဘရိုကျတနျအသငျးက သူ့ကို လိုခငျြတဲ့ အသငျးအနနေဲ့ ပေါငျသနျး ၅၀ ပေးခရြေမယျလို့ ဈေးနှုနျးသတျမှတျထားခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျလူငယျနောကျခံလူ ဘနျဝှိုကျကို မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့အပွိုငျ လီဗာပူးလျတို့ ချေါယူသှားဖှယျရှိနေ။
–	နှဈလလောကျ အနားယူရဖှယျရှိနတေဲ့ တောငျပံတိုကျစဈမှူး ဒီယိုဂို ဂြိုတာရဲ့ နရောအတှကျ အရေးပျေါ ဖွရှေငျးခကျြတဈရပျကို လီဗာပူးလျတို့ လုပျဆောငျသှားဖှယျရှိနပွေီး နညျးပွ ယာဂနျ ကလော့ပျရဲ့ ခြီးကြူးမှုနဲ့ အထငျကွီးမှုကို ရရှိထားတဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး ဟာဗီ အီးလီးယော့ကို ဘလကျဘနျးကနေ ပွနျလညျချေါယူသှားဖှယျရှိ။
I will always be pleased for your contribution on my career. Thank you.
Rest In Peace. 💔 pic.twitter.com/tiUNbicRO2
— Sadio Mané (@SMane_Officiel) December 14, 2020
–	လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ကစားသမားဘဝကို ခုလိုမြိုးရောကျလာအောငျ ကူညီမှုအဖွဈ ရကျဒျဘူးလျ ဆာ့လျဇျဘတျအသငျးကို ချေါယူပေးခဲ့တဲ့ ဂရြယျ အူလီယေးကို မိမိရဲ့ ဘဝမှာ အမွဲတမျး အမှတျရနတေော့မှာဖွဈပွီး ကြေးဇူးတငျကွောငျးနဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာ အနားယူပါတော့လို့ ဆာဒီယို မာနေး လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲပွောကွား။
–	အသငျးကနေ ဘာစီလိုနာဆီ ထှကျခှာဖို့ ခြိတျဆကျနခေဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ ဂြျောဂြီနီယို ဗိုငျနယျလျဒှမျရဲ့ နရောကို ပွနျလညျအစားထိုးမှု ပွုလုပျသှားဖို့ အနျးဖီးလျမှာ နှဈဂိုးသှငျးယူခဲ့ဖူးတဲ့ အကျသလကျတီကို မကျဒရဈအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျလူ မားကို့ဈ ယျောရနျတေးကို လီဗာပူးလျတို့ စောငျ့ကွညျ့နေ။
–	လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂန် ကလော့ပ်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ နောက်ခံလူ ဗာဂျီးလ် ဗန်ဒိုက်ကို ဒဏ်ရာရရှိနေပေမယ့်လည်း မူလစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီး အသင်းဘက်က စတင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီလို့သိရ။
–	ဂျိုယယ်လ် မာတစ်ပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကတော့ သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် လီဗာပူးလ်တို့အနေနဲ့ စိတ်ချထားလို့ မရဘူးလို့ ပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီမှာ မာမာချာချာနဲ့ အသင့်သုံးလို့ရမယ့် နောက်ခံလူတစ်ဦး မခေါ်ခဲ့ရင် စိတ်ပျက်စရာ ရာသီဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြ။
–	လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ နည်းပြဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂရေယမ် ဆူးနက်စ်က စပါးစ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ မိမိတို့ရဲ့ အသင်းမှာဆိုရင် ပွဲထွက်လူစာရင်းထဲ ဝင်နိုင်မယ့်သူမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ပွဲကြိုက်တိုက်ခိုက်သွားခဲ့။
–	အာဆင်နယ်နဲ့ ပြင်သစ်ကစားသမားဟောင်း သီယာရီ အွန်နရီက လီဗာပူးလ်နည်းပြဟောင်း ဂျရယ် အူလီယေးဟာ နည်းပြတစ်ဦးထက် အများကြီးပိုတဲ့ အရာရာမှာ လမ်းညွှန်ပဲ့ကိုင်ပေးသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပြီး သူနဲ့ ပြင်သစ် ယူ-၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ အသင်းတွေမှာ ဆုံစည်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေအကြောင်း တမ်းတပြောကြားသွားခဲ့။
–	လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ အန်းဖီးလ်မှာ ရင်ဆိုင်မယ့် စပါးစ်အသင်းရဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာ ဝါရင့်ကစားသမား ဂါရက်ဘေးလ်ကို အသုံးပြုလာဖွယ်ရှိပြီး နည်းပြ မော်ရင်ညိုအနေနဲ့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် အားနည်းနေတဲ့ ယာဂန် ကလော့ပ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့ ခံစစ်ပိုင်းကို ဖိအားပေးဖွယ်ရှိနေ။
–	ဘရိုက်တန်အသင်းက သူ့ကို လိုချင်တဲ့ အသင်းအနေနဲ့ ပေါင်သန်း ၅၀ ပေးချေရမယ်လို့ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်နောက်ခံလူ ဘန်ဝှိုက်ကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အပြိုင် လီဗာပူးလ်တို့ ခေါ်ယူသွားဖွယ်ရှိနေ။
–	နှစ်လလောက် အနားယူရဖွယ်ရှိနေတဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ဒီယိုဂို ဂျိုတာရဲ့ နေရာအတွက် အရေးပေါ် ဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို လီဗာပူးလ်တို့ လုပ်ဆောင်သွားဖွယ်ရှိနေပြီး နည်းပြ ယာဂန် ကလော့ပ်ရဲ့ ချီးကျူးမှုနဲ့ အထင်ကြီးမှုကို ရရှိထားတဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဟာဗီ အီးလီးယော့ကို ဘလက်ဘန်းကနေ ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားဖွယ်ရှိ။
–	လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ကစားသမားဘဝကို ခုလိုမျိုးရောက်လာအောင် ကူညီမှုအဖြစ် ရက်ဒ်ဘူးလ် ဆာ့လ်ဇ်ဘတ်အသင်းကို ခေါ်ယူပေးခဲ့တဲ့ ဂျရယ် အူလီယေးကို မိမိရဲ့ ဘဝမှာ အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေတော့မှာဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူပါတော့လို့ ဆာဒီယို မာနေး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောကြား။
–	အသင်းကနေ ဘာစီလိုနာဆီ ထွက်ခွာဖို့ ချိတ်ဆက်နေခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျီနီယို ဗိုင်နယ်လ်ဒွမ်ရဲ့ နေရာကို ပြန်လည်အစားထိုးမှု ပြုလုပ်သွားဖို့ အန်းဖီးလ်မှာ နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ဖူးတဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ မားကို့စ် ယော်ရန်တေးကို လီဗာပူးလ်တို့ စောင့်ကြည့်နေ။